बिकिनी पोज दिदा पनि बलिउडमा जम्न सकेनन् यी अभिनेत्रीहरु
केही दशक अघि बलिउड फिल्महरुमा बिकिनी पोज दिन ठुलै च्यालेन्जको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । तर अब त्यो समय रहेन । प्रत्येक दुई फिल्ममध्ये एक फिल्ममा बिकिनी पोजहरु रहेका हुन्छन् ।
बिकिनीका लागि पर्फेक्ट शरिर बनाउनका लागि अभिनेत्री तथा मोडलहरु विभिन्न योगा, व्यायम समेत गर्ने गर्छन् । पुरानो समयमा पनि केही यस्ता अभिनेत्रीहरु थिए जो बिकिनी पोज दिन केही डर मान्ने गर्दैनथे ।
तर उनीहरुको बिकिनी पोजले खासै असर गरेन । उनीहरुको बिकिनी पोजलाई कि त खिल्ली उडाइयो या त उनीहरुलाई असहज हुने अवस्थामा सिर्जना भए ।
बलिउड फिल्मका केही झुर बिकिनी पोजहरु
१. काजोलले ‘बाजिगर’ फिल्ममा दिएको बिकिनी पोज । उनको बिकिनी पोजलाई त्यो बेला निकै हट एण्ड सेक्सी पोजको रुपमा लिइएको थियो । तर उनको बिकिनी पोजले कुनै काम गर्न सकेन । उनको बिकिनी पोजको खिल्लीमात्र उडाइयो ।
२.फिल्म ‘बेबकुफिया’का लािग सोनाम कपुरले बिकिनी पोज दिएकी थिइन् । उनको बिकिनी पोजको प्रंशसाभन्दा बढी मजाक बनाइएको थियो ।
३. अर्को झुर बिकिनी पोज दिने नायिकामा परेकी छिन् समिरा रेड्डी । उनको बिकिनी पोजलाई लिएर उनको फिगरको विश्लेषण नकारात्मक रह्यो ।
४. अमिशा पटेलः अमिशा पटेल फिल्ममा बोल्डसिन दिन हिचकिचाउने नायिकामा पर्छिन् । उनले ‘थोडा प्यार थोडा म्याजिक’ फिल्ममा दिएको बिकिनी पोजले कुनै जादु चलाउन सकेन । पहेलो बिकिनी सुटमा देखिएकी उनको बिकिनी पोजलाई लिएर राम्रो टिप्पणी भने हुन सकेन ।
५. धुम फिल्म हिट भएपनि इशा देवलको करिअर भने ओरालो लाग्यो । उनले दिएको बिकिनी पोजले पनि कुनै जादु गर्न सकेन ।
६.मिनिसा लाम्बाः फिल्म किडन्यापमा बिकिनी पोज गरेर आफ्नो फिल्मी करिअर माथि ल्याउने प्रयास गरेकी मिनिसाको करिअर पनि पानीमा डुब्यो ।
नेपालमा थप ३२२ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३२२ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य
प्रमलाई प्रतिनिधिसभामा अवरोध नआएको जिकिरः बहस मंगलबार पनि
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरि